GMDQ oo ka qeybgalay Shirkii A-WEB ee 31 August Sanadkan – GMDQ
GMDQ oo ka qeybgalay Shirkii A-WEB ee 31 August Sanadkan
31 August ayaa Gudoomiye Ku-xigeenka Guddiga Madaxbanaan ee Doorashooyinka Qaranka Mudane Sayed Cali Mohamed ka qeybgalay shirka sedexaad ee Ururuda Doorashooyinka Dunidda ee lagu qabtay Bucharest, Romania. Intii lagu gudajiray shirka ayaa Guddiga loo ogolaaday xubin ka mid noqoshada Ururada Doorashooyinka Dunida.
Guddiga Guddiga Madaxbanaan ee Doorashooyinka Qaranka ayaa u gudbiyay horaantii sanadkan 2017da codsi uu Guddiga ku codsanayo ka mid noqoshada Ururada Doorashooyinka Dunidda. Wadamada Papa New Guinea, Colombia iyo Peru ayaa ayagana loo ogolaaday kamidnoqoshada Ururada Doorashooyinka Dunidda. Xubnaha cusub ee Ururada Doorashooyinka Dunidda ayaa ku biiri doona 106da xubnood ee ka kala socda 104 waddan halka hal xubin ay dib ula noqotay xubin kamid noqoshadooda.
Dallada Ururada Doorashooyinka Carabta, The Organization for the Arab Electoral Management Bodies (Arab EMBs) ayaa iyagana noqday xubin iskaashi ee ka mid ah Ururada Doorashooyinka Dunidda ee AWEB. GMDQ ayaa sidoo kale xubin ka ahaa Dallada Ururada Doorashooyinka Carabta ilaa 2016kii, daneynayana inuu kororsodo aqoontiisa ku aaddan doorashooyinka ee hey’adaha caalamiga ah.
Xoghayaha Guud Mudane Yong-Hi Kim, ayaa dib loogu magacaabay Madaxweynaha wuxuuna sii heyn doonaa muddo sanad ah, Gudoomiyaha Guddiga Rasmiga ah ee Doorashooyinka Romania Mudanne Daniel Barbu, ayaa isna loo magacaabay Gudoomiyaha A-WEB.
Inta lagu jiray kalfadhiga intiisa kale Golaha wuxuu ka hadlay warbixinta maaliyadeed iyo xisaabtanka ee 2015-16 iyo qorshayaasha miisaaniyadda ee 2017. GMDQ wuxuu ku qanacsan yahay in qaar ka mid ah hawlaha loogu talagalay 2018, oo lagu soo bandhigay fadhiga, ay uga faa’iideysan doonaan diyaarinta doorashooyinka soo socda ee Soomaaliya (doorashooyinka guud ee 2020/21).
Golaha A-WEB wuxuu sidoo kale wax ka beddelay Dastuurka Ururka, gaar ahaan xubnaha Guddiga Fulinta ayaa la kordhiyay si ay u gaaraan 17, waxaana loo qaybiyay sidan: shan dal Afrika ah (Burkina Faso, Tunisia, Kenya, Malawi iyo Guinea), afar ka mid ah Ameerika iyo Aasiya, saddex dal oo Yurub ah iyo hal Oosheeniya.
Ugu dambeyntii Golaha ayaa ansixiyay go,aaammo si wadajir ah laysugu raacay kuwaasoo looga gol leeyahay in lagu hormariyo Ururka Wakiilada Doorashooyinka Caalamka.
Waxaa la faafiyey September 13, 2017